ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: March 2009
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, March 31, 20096comments:
ရေးသားသူ may16 at Monday, March 30, 20093comments:
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 29, 20097comments:
ရေးသားသူ poemflower at Friday, March 27, 20099comments:
ရေးသားသူ may16 at Thursday, March 26, 2009 8 comments:
တစ်ခါတုန်းက မြေခွေးနဲ့ ငှက်ကျားဟာ အလွန်ခင်မင် တဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လည်ပတ်ကြသတဲ့ ဒါနဲ့မြေခွေးက ငှက်ကျားကို ညစာ ဖိတ်လိုက်တယ်. သူ့ကို ကျီစယ်ဖို့ ဘာမှချမပေးဘဲ အလွန်ပြားချပ်တဲ့ ပန်းကန်မှာ စွပ်ပြုတ်ရည်ကို ငှဲ့ကျွေးသတဲ့. . . ဒါကို မြေခွေးကလျှာနဲ့ အသာကလေး လျှက်လို့ရပေမယ့် ငှက်ကျား အဖို့မှာ နှုတ်သီးဖျား စိုရုံလောက်ရှိတာပေါ့လေ. .
ငှက်ကျား ဟာ ဘယ်စားလို့ရပါ့မလဲ. . . ဒီတော့ အစာငတ်ပြီးနေရော. . . ပေါ.
"၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ၊ ဒီစွပ်ပြုတ်ကို ခင်ဗျားမကြိုက်ဘူးထင်ရဲ့" . . . လို့ မြေခွေးကပြောသတဲ့ . . .
ဒီတော့ ငှက်ကျားက "တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး၊ အခုလိုဖိတ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော့ဆီလည်း မကြာခင် အလည်လာပြီး ညစာလာစားပါအုံး" လို့ ချိန်းဆိုလိုက်သတဲ့ . . ..
ငှက်ကျား ချိန်းဆိုတဲ့နေ့ကို မြေခွေးက ညစာစားဖို့လာသတဲ့. .
ထမင်းစားပွဲမှာ သူတို့ထိုင်လိုက်တယ်. . ညစာဟာ အ၀ကျဉ်းကျဉ်းလည်တံ အလွန်ရှည်တဲ့ ကရားထဲရှိသတဲ့. . . ဒီကရား မှာ မြေခွေးရဲ့ နှာသီးကို ဘယ်သွင်းလို့ရမလဲကွယ်. . . ဒါကြောင်းမြေခွေးဟာ ကရားရဲ့ နှုတ်ခမ်းအပြင်ဘက် ကိုသာလျက်ရုံပဲလေ. . .
ဒီတစ်ခါငှက်ကျားက ဆိုသတဲ့ "အခုလိုညစာကျွေးရတာ ကျွန်တော်တောင်းပန်ဖို့ မလိုပါဘူး " လို့ပြောလိုက် သတဲ့ . . .
ကိုယ်ကမကောင်းကြံလျှင် သူကလည်း မကောင်းကြံသည်. .
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, March 24, 20099comments:
အချို့သောသူများ၌ ဥစ္စာရှိ၏ . . . အဆောင်အယောင်ရှိ၏. . . သို့သော် အနေအထိုင်မတတ်၊ ကြမ်း - ၉ - ကြမ်းကြောင့် လူရာမ၀င်သလိုဖြစ်နေသည် . .
အချို့သောသူများ၌ ဥစ္စာရှိ၏ . . . ကျောင်းပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ လက်မှုပညာတတ်ပါလျက်နှင့် သတိမပြုမိသော ကြမ်း - ၉ - ကြမ်းကြောင့် လူအထင်အမြင်အသေးခံရ၏ . . .
အချို့သောမိန်းကလေးများ ရုပ်ရည်လှပပါလျက် . .ကြမ်း - ၉ - ကြမ်းကြောင့် ရုပ်ကလေးသနားကမားနဲ့ လူက အောက်တန်းကျလိုက်တာ ဟု ပြောဆိုခံရတတ်၏ . .
"နာမည်ဆိုးရမည်ကိ သေရမည်ထက်ကြောက်ပါ "ဟူသော အီဂျစ်စကားပုံရှိသည်. . .
တန်ဖိုးမဲ့သော ၊ လူအထင်သေးခံရသော ၊ နာမည်ဆိုးရသော ကြမ်း - ၉ ကြမ်းမှာ . .
၁. ပလုတ်ပလောင်း ပါးဖြဲနားဖြဲနားဖြဲ စားသော အစားကြမ်း ၊
၂. ဒူးထောင်ပေါင်ကားအိပ်သော အအိပ်ကြမ်း၊
၃. ခြေနင်းပြင်း၍ ဟိုယိုင်သည်ယိုင်သွားသော အသွားကြမ်း၊
၄. ပေပေရေရေထိုင်သော အထိုင်ကြမ်း၊
၅. လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး၍ အော်ကျယ်ဟစ်ကျယ် ရယ်သော အရယ်ကြမ်း၊
၆. အရိုအသေမထားသော ကိုယ်ကြမ်း
၇. ဆဲရေးတိုင်းထွာပြောသော နှုတ်ကြမ်း
၈. အမှုနှင့်မလိုက်အောင် ရိုက်နှက်ဆုံးမသော အဆုံးအမကြမ်း၊
၉. သူတစ်ပါးအား ထစ်ခနဲ့ရှိလျှင် စိတ်လိုက်မာန်ပါ မကောင်းကြံတတ်သာ စိတ်ကြမ်း။
သုတမရှာ၊ စာပေမသင်၊ နှုတ်တွင်မဆောင်၊ သိအောင်မမှတ်၊ အကျင့်မြတ်ကွာ၊ဤ ငါးဖြာ အမှန်ရိုင်းစိုင်းကြောင်း ဆိုသကဲ့သို့ ကြမ်း - ၉ - ကြမ်းသည်လည်း ရိုင်းစိုင်းကြောင်း အမှန်ပင်ဖြစ်၏ ....
သုတေသီဘုန်းမြင့်သွေး(ဘ၀တန်ဖိုး အမှန်တိုးအောင် )
ရေးသားသူ may16 at Monday, March 23, 20097comments:
အရွယ်အို အမေဗျာဆရာမကြီး ကို သား(၃) ဦးက မွေးနေ့လက်ဆောင်များ အဖြစ် . . .
ပထမသားကြီးက - ကောင်းမွန်သပ်ရပ် ကျယ်ဝန်းလှပတဲ့ တိုက်အိမ်ကြီးတစ်လုံး ၀ယ်ပေးလိုက်ပါတယ်....
"သားကြီးရယ် အိမ်ကြီးကကျယ်ဝန်းလှပါတယ် . . . အမေ့အတွက် တစ်ခန်းရှိတယ်ဆို လုံလောက်ပါပြီကွယ် . . . အိမ်ကြီးကကျယ်လွန်းတော့ ထိန်းသိမ်းရ၊ အမှိုက်လှည်းရ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ တာဝန်ကြီးပြီး အမေ့အတွက် ပင်ပန်းလှပါတယ်ကွယ်. . . . လို့ပြောသတဲ့ . . . "
သားလတ်ကတော့ ကားတစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ် . . .
"သားရယ် အမေက အရွယ်အိုလှပြီ ဆိုတော့ ခရီးမသွားနိုင်ပါဘူးကွယ် . . . . အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်ထဲမှာပဲနေတာ ဆိုတော့ ကားကအမေ့အတွက် အပိုပစ္စည်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်. . . ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ရတာ တာဝန်တစ်ခု ပါပဲကွယ် . . . "
သားငယ်လေးကတော့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားလို့ ကဗျာပုဒ်ရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရွတ်နိုင်တဲ့ ကြက်တူရွေးလေး တစ်ကောင် ၀ယ်ပေးလိုက်ပါတယ်. . . .
"သားလေးရေ အမေက အရွယ်အိုဆိုတော့ ကဗျာ၊ စာဝါသနာပါပေမယ့် စိတ်သာရှိပြီး . . . မျက်စိမွဲတော့ မရေးနိုင်၊ မဖတ်နိုင် ဖြစ်နေတာ. . . သားလေးပေးတဲ့ ကြက်တူရွေးလေးက အမေမသိသေးတဲ့ ကဗျာတွေရွတ်ပြတာကို နားထောင်ရတာ ပီတိဖြစ်လိုက်တာ. . . . ပြီးတော့ အမေ့စိတ်ကူးနဲ့စပ်ဆိုတားတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ပြန်ရွတ်ပြတော့ နောက်တစ်နေ့မှာ သူက ပြန်ရွတ်ပြနိုင်တယ်ကွယ်. . . . ကဗျာသံ၊ စာသံကြားနေရတော့ ၀မ်းသာ ကြည်နူးစိတ်ချမ်းသာရတယ် ကွယ်. . . "
"သားလေးရဲ့ကြက်တူရွေးက အစ်ကိုကြီးတွေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ကားတွေထက်၊ အမေ့အဖို့တော့ တန်ဖိုးရှိလှပါသကွယ် . . . . "
အာလုံး လိုအပ်ချက်နဲ့ဖြစ်လာတာတွေအားလုံး ဆန္ဒတွေတူညီပါစေ. . . .
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 22, 20097comments:
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, March 21, 20097comments:
ရေးသားသူ poemflower at Friday, March 20, 20094comments:
၀သဘမင်းကြီးသည် ရဟန္တာအရှင်မြတ်ငါးရာတို့အား ပင့်ဖိတ်၍ ဆွမ်းကျွေးတော်မူပြီးနောက်...
တပည့်တော်၏ သက်တမ်းကို ဒိဗ္ဗစက္ခုဖြင့် ကြည့်ရှုပေးတော်မူပါဘုရား....ဟု လျှောက်ထားလေသည်။
ဒိဗ္ဗစက္ခု ရသော ရဟန္တာများကလည်း.....
ဒကာတော် မင်းကြီး ယနေ့မှစ၍ (၁၂)နှစ် အထိ အသက်ရှည်မည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုလော့ ဟု မိန့်ကြားတော်မူကြ၏။
တပည့်တော် ၏ ဇာတာကို ပုဏ္ဏာများစစ်ဆေးရာတွင်လည်း (၁၂)နှစ်သာလျှင်အသက်ရှည်မည်ဟု ဆိုပါကြောင်း တပည့်တော်သည် အသက်ရှည်လိုသူဖြစ်သဖြင့် ကျင့်အပ်သောတရားများကို ပေးသနားပါ...ဟု လျှောက်ထားသည်။
ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့က ကောသလ မင်းကြီးအား မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားများကို ၀သဘမင်းကြီးအား ဟောပြတော်မူသည်။
၀သဘမင်းကြီး ကျောင်းကန်နေရာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလ၊ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ခြင်း၊ ရေစစ်၊ ကျောင်းကန်နေရာ၊ ရောဂါရှိသော ရဟန်းသံဃာတို့အတွက် ဆေးလှူခြင်း၊ ဤသို့ပြုလျှင် အသက်ရှည်မြဲလေတည်း...ဟု ဟောကြားတော်မူသည်။
ဤနည်းအတိုင်းလိုက်နာ သဖြင့် ၀သဘမင်းင်္ကြီးသည် ရှေ့အဖို့(၄၄)နှစ်ကြာအောင် အသက်ရှည်တော်မူ၏။
ပိုစ့်လေး၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့....လူတိုင်း အိုနာသေ ကိုမလွဲမသွေကြုံတွေ့ကြရမှာပါ...။ အန်တုလို့မရပါ။
မြတ်စွာဘုရားတောင်မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ ဒါန ဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တရားကိုအခြေခံကာ...သီလ ကို မြဲမြံ၍...အိုနာသေကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများ တဆင့်ထက်တဆင့် ကြည်ညိုပွားများ အားထုတ်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရေးသားသူ may16 at Thursday, March 19, 2009 8 comments:
ကျွန်မတို့အားလုံး သူငယ်ချင်းများ ၊ မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးများကို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးခဲ့ဖူးကြပါတယ်.. . ပေးတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ပေးတဲ့လက်ဆောင် ဟာတန်ဖိုးရှိဖို့ မလိုဘူး.. ပေးတဲ့သူရဲ့စေတနာသာလိုအပ်ပါတယ်.. ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပေးသင့်ပေးထိုက်တာကို ပေးရင် လက်ခံတဲ့သူကလေည်း ကျောက်တုံးတစ်တုံး ဖြစ်နေပါစေ စိန်တစ်ပွင့်လို တန်ဖိုးထားပါတယ်...
လက်ဆောင်ပေးရာတွင် တန်ဖိုးကြီးစရာမလိုပဲ အတွေးဖြင့်ဆင်ခြင်ပေးရန်သာလိုပါသည်.... စာဖတ်ဝါသနာ မပါသည့် သူကို စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည် အချည်းအနှီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်. . . ဂေါက်ရိုက်ဝါသနာပါသည့် သူကိုလည်း ဂေါက်နှင့်ပတ်သက်သည့် လက်ဆောင်များ ကိုသာပေးပါ က သူ့အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိမည် ဖြစ်ပါသည်. .
အောင်မြင်ချင်လျှင် ပေးကမ်းရသည်. . . "ပေးကမ်းခြင်းသည်အောင်မြင်ရာ" ဆိုသည်မှာ ရှေးကတည်းက ကျင့်သုံးလာ ကြသည့်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်. .
ပေးကမ်းရာတွင် အကြောင်းမဲ့ပေးခြင်းမဖြစ်ရ. . . . ဥပမာ. မွေးနေ့လက်ဆောင် နှစ်ပတ်လည်၊ နှစ်သစ်ကူး၊ ခရစ်စမတ်၊ လက်ထပ်ပွဲ စသည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့များတွင် လက်ဆောင်ပေးသင့်ပါသည်. .
နိုင်ငံခြားသွားလျှင် ကိုယ့်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် အမှတ်တရ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသင့်ပါသည်. . . နိုင်ငံခြားသားများသည် တိုင်းတစ်ပါးမှ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းလေးများကို အထူးနှစ်သက်တတ်သည်. . . လက်ဆောင်ရသူအနေဖြင့် ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်သူအဖြစ် ထင်မြင်စေနိုင်ပါသည်. . . . လတ်တလော အကျိုးမခံစားရလျှင်သာရှိမည်. . . စေတနာအကျိုးကိုတော့ ခံစားရပါလိမ့်မည်. . . .
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း ကိုယ့်ချစ်သူခင်သူများအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးများရွေးချယ် ပေးနိုင်ပါစေလို့. . . .
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, March 18, 2009 14 comments:
ကျမ မေ၁၆ ကို....အစ်မ ပန်းကဗျာက လှမ်းမေးပါတယ်။ ဒီနေ့ ဘာပိုစ့်တင် မလဲတဲ့။ တင်မယ် စာရှာအုံးမယ်လို့ ပြောသာပြောလိုက်တယ်....ဘာတင်ရမှန်းမသိသေး။ ကျမတို့ဘလော့လေးက စာကြည့်တိုက်ဘလော့လေးဖြစ်လို့ ဗဟုသုတ လေးတွေပဲဖြန့်ဝေချင်ပါတယ်။....ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိ ဘလော့ပေါ် မှစာဖတ်သူ မောင်နှမများအနေနှင့် ဖတ်ရကျိုးလဲနပ် စေချင်ပါတယ်။ ပိုစ့်အတွက်... စာများရှာဖတ်ရင်းနဲ့ အမှတ်မထင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဒေါသငြိမ်းအေးနည်း လေးကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဘာရဒွါဇ ပုဏ္ဏားကြီးက မြတ်စွာဘုရားသခင်ကို အမြဲဆဲရေး ရှုတ်ချပြီး တစ်နေ့တော့ မေးခွန်းမေးတယ်။ သူပြောတာတွေကို စိတ်မဆိုးဘူးလားတဲ့၊ မြတ်စွာဘုရားသခင်က ပြန်ဖြေတယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးတဲ့၊ မိတ်ဆွေများက ပုဏ္ဏားကြီးကို လက်ဆောင်များ လာမပေးဘူးလားတဲ့၊ လာပေးတဲ့အခါ ပုဏ္ဏားကြီးက လက်ခံထားရင် ဒီပစ္စည်းဟာ ပုဏ္ဏားကြီးလက်ထဲမှာ ကျန်ရစ်မှာပဲ၊ လက်မခံပဲ ပေးလာသူကို ပြန်ပေးလိုက်ရင် သူ့လက်ထဲ ပြန်ရောက် သွားတယ်။ ဒကာကြီးလက်ထဲ ဘယ်ရှိတော့မလဲတဲ့၊ ဒီလိုပဲ၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာ ရှုတ်ချသူတွေ ပေးတဲ့ ဒေါသကို ကိုယ် လက်ခံထားရင် ကိုယ်ပဲ ဒီဒေါသရပြီး ပူလောင်မှာ၊ ကိုယ်က လက်ခံယူမထားပဲ ပြန်ပေးလိုက်တော့ သူ့ဒေါသ သူ့ဆီကို ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဖြေတယ်။
ကဲ ကျမတို့လည်း ဒေါသပေးလာသူတို့အား သူတို့လက်ထဲ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် အေးငြိမ်းမှုကို ရယူကြရအောင်။
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, March 17, 2009 16 comments:
ရေးသားသူ may16 at Saturday, March 14, 20097comments:
ရေးသားသူ may16 at Friday, March 13, 20095comments:
တစ်ခုသော သာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာ ဂဏန်းနှစ်ကောင်ဟာ သူတို့ရဲ့ တွင်းကထွက်ပြီး သောင်ပြင်မှာ အပျင်းပြေ လမ်းလျှောက်ကြသတဲ့ . .
ဒီတစ်ခါမှာ မိခင်ကဆိုသတဲ့. . .
"သားရယ် မင်း လမ်းလျှောက်တာ သိပ်အကျည်းတန်တယ် . . . လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ဟိုယိမ်းဒီယိမ်း မတိမ်းပဲ တည့်တည့် မတ်မတ်သွားမှပေါ့ . . . . " လို့ပြောသတဲ့. . .
အဲဒီအခါမှာ သားငယ်ကဘယ်လိုပြန်ပြောလည်း ဆိုတော့ . .
"ကျေးဇူးပြုပြီး အမေကိုယ်တိုင် နမူနာ လျှောက်ပြပါ . . တဲ့ "
"ကျွန်တော် ဟာ အမေသွားသလို သွားပါ့မယ်. . . " တဲ့.. ..
(Example is the best precept)
လင်းထွန်း (အီစွတ်စကားပုံများနှင့် ၊ ပုံပြင်များ)
ရေးသားသူ may16 at Friday, March 13, 20094comments:
လူ့ဘ၀မှာ လူတိုင်းလူတိုင်း လုပ်စရာတွေ အရေးပေါ်ကိစ္စတွေ၊ တစ်နေ့တာ ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေက မနည်းပါဘူး. . . ဒီအလုပ်တွေကြောင့် တွေးပြီး ပူပင်နေရတာကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင် ရမှန်းတောင်မသိအောင် မျိုးကို ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်... ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တမ်း စာအုပ်ကို.... ကြည့်လိုက်တိုင်း လုပ်စရာတွေ ကိုကြည့်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ. . . စိတ်ရှုပ်မိပါတယ်.. .
အိမ်က ကိုယ်ပိုင် အလုပ်တွေရော၊ ရုံးဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ ကိုယ်လိုလူတွေအတွက်တော့ အလုပ်တွေ များကြီး ပုံလာရင် ဘယ်ကစပြီး ဘာကိုင်ရမှန်းမသိပါဘူး . . အဲဒီအခါမျိုးမှာ လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ်လာတဲ့ အခါ အလိုလို စိတ်တွေတိုလာသလို၊ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည့်လာတဲ့ အခါမှာ စိတ်တွေရှုပ်ထွေးရတာ မျိုးဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ် . .
လူသားတွေရဲ့ လိုချင်မှုတွေ ၊ လိုအပ်မှုတွေက တဖြည်းဖြည်း ပိုများလာတဲ့ ကာလကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုး. . . ရှေးခတ်တုန်းက လူတွေမှာ ရုပ်ဝတ္တု လိုအပ်မှု ဒီလောက်မများပါဘူး. . . စာပုံနှိပ်စက်၊ ကွန်ပျူတာ မပေါ်ခင်တုံးက ပေရွက်မှာ စာရေးခဲ့ရတာ ၊ စာရွက်ပေါ်လာ တော့ စာရွက်ပေါ်မှာ လက်ရေးတွေနဲ့ရေးခဲ့ရတုန်းက စာအုပ်တွေ များတော့ ရှားပါးပြီး အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်. . . ရှားပါးခြင်းက တတိယကမ္ဘာ အဆင့်ထက် နိမ့်တဲ့ စတုတ္ထ ကမ္ဘာတွေမှာ ရင်ဆိုင်နေကြရပေမယ့်. . . ဖွံ့ဖြိုးပြီးစက်မှုနိုင်ငံတွေမှာ တော့ "ပေါများခြင်း" ဝေဒနာကို ခံစားရနေပါပြီ..
လူသားအားလုံး ဟာ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ်. ကိုယ်တိုင် ပြည့်ကျပ်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားနေရတာပါ. . . ပိုက်လုံးတစ်ခုဟာ ရေစီးလို့မရအောင် ပိတ်ဆို့နေခဲ့ရင် မကောင်းတဲ့ရေတွေလျှံထွက်လာတတ်သလို လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာလည်း တင်းကြမ်းကျပ်ညှပ်အောင် လုပ်စရာတွေမှတ်နေရင် ဦးနှောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်လာပြီး အာရုံစူးစိုက် မှုက အားနည်းသွားတာပေါ. . . အိမ်မှာရော အလုပ်မှာရော ဦးနှောက်ပိတ်ဆို့မှုတွေများလာတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုဖြေလျော့ရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတတယ် ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်ရမယ့်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်. . .
၁. ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ဦးနှောက်ကိုဖွင့်ပေးခြင်း။
ဘာကိုမှာ မိမိရရ အာရုံစိုက်လို့မရရင် မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး အသက်ကို ဖြည်း၂မှန်၂ရှူပါ. . တရားမှတ်ဖူးသူတွေ အတွက်တော့ အန်မတန်လွယ်ကူပါတယ် . . ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲ အသက်ရျှူတာကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ.
၂. အရောင်တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်ခြင်း ။
ဥပမာ အပြာရောင်ကို မျက်လုံးမှိတ်ထားတုန်း အာရုံထဲမြင်အောင်လုပ်ပြီး မျက်လုံဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အပြာရောင်ကို ရှာဖွေပါ . (ဥပမာ ကောင်းကင်ပေါ. ) ကိုယ်ကအရောင်တစ်ခုကို စူး၂နစ်စိုက်တဲ့ အခါမှာ ဦးနှောက်မှာ တင်းကျပ်တာတွေ ပူပင်မှုတွေ ပျောက်နေပါတယ်..
ဒီအဆင့်မှာတော့ မျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်ပြီး အသက်မှန်မှန် ရှုသွင်းရှုထုတ်ရပါမယ်။စိတ်ကလည်း ဒီအဆင့်ရောက် ရင်ပြေလျော့လာပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ အရာ ၀တ္တုတစ်ခုခုကို ပါ အ၀ိုင်းပုံဖြစ်စေ၊ အရှည်ပုံဖြစ်စေ၊ ကားတစ်စီးပုံဖြစ်စေ အာရုံ စိုက်ကြည့်ပါ။
၄။ စိတ်ဖြေလျှော့ပြီး အာရုံစိုက်ပါ။
ကိုယ်တိုင် အရောင်နဲ့ ပုံ တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်တဲ့အခါ (ဥပမာ အစိမ်းရောင်ကားတစ်စီး)မှာ ဆူညံသံတွေ၊ အခြားအရောင်တွေ၊ အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေက ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အဖြစ်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီလိုဝင်ရောက် လာတာ ကိုယ်တိုင်အာရုံစိုက်မှု အားမကောင်းလို့ပါ။ စိတ်ကိုတင်းပြီး အာရုံစိုက်ရမယ်အစား စိတ်ကို ဖြေလျှော့ကာ မှန်မှန်လေး အသက်ရှုပြီး အာရုံစိုက်ပါ။
၅။ အကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အာရုံစိုက်မှု။
အာရုံ စူးစိုက်မှုကို ဖြေလျှော့ပြီး လုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်နေ့စဉ် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မှလည်းသီးခြား အာရုံစိုက်ကြည့် ရမှာပါ။ ကားမောင်းရင်း ကားမောင်းတဲ့ ကိစ္စကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး တခြားကိစ္စတွေ ခေါင်းထဲ ၀င်မလာအောင် လုပ်နိုင်လာတာ တွေ့ရပါမယ်။
၆။ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စကို အာရုံစိုက်မှု။
နိစ္စဓူဝ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက်နိုင်မှု ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်တင်းကျပ်မှု၊ စိတ် ညစ်ညူးမှု၊ ဦးနှောက် ပိတ်ဆို့စေမှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့ ကိစ္စတွေ အပေါ်မှာ တဆင့်တက်ပြီး အာရုံစိုက်ရတော့မှာပါ။
ဒါကြောင့် အထက်မှာ ရေးပြထားသလိုပဲ ဘယ်ကစရှင်းရမှန်းမသိဘဲ စိတ်တွေရှုပ်လာရင်. အဓိကကျတဲ့ အလုပ်တွေကို အရင်ဦးစားပေးလုပ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့တင်းကျပ်နေတဲ့စိတ်တွေကို အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း လျော့ချလိုက်ရင် စိတ်တွေရွင်လန်းချမ်းမြေ့ စွာနဲ့ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှာမလွဲပါတော့ပါဘူးရှင်. . . .
ရေးသားသူ may16 at Thursday, March 12, 20092comments:
မြန်မာလူမျိုးများကြားတွင် အမှားကြာ အမှန်ဖြစ်နေသော စကားပုံနှစ်ခုရှိ၏ ။ ပထမ တစ်ခုကား " သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ " အပေါ်ရံကြည့်လျှင် လူမိုက်အားပေး ဖြစ်နေသည် ကိုတွေ့ရ၏ ။ ထိုစကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အကုန်ဖော်ကြည့်လျှင် သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်ကောင်းမည်. . . သင်မိုက်မဲ ဆိုးယုတ်နေလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း မိုက်မဲ ဆိုးယုတ်မည်ဟူသော. . . အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်နေသည် . . ပါးရိုက်လျှင် နားကိုက်မည်ဟူသော စကားပုံနှင့် အတူတူ ပင်.... သင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကျွနုပ်ကား ဆိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ခံယူထားမှ ကိုယ်ကျင့်သီလ နှင့် သဘောထားကြီးမှုကို အလေးပေးရာ ရောက်လေလိမ့်မည်. . . ထိုစကားပုံ အစား .
"ငွေကြေးမွဲသော်လည်း ရိုးသားမှုချမ်းသာသည်။ "
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ကလဲ့စားချေခြင်းထက် နှစ်ဆထိရောက်သည်။
ဟူသော စကားပုံများကို အစားထိုး သုံးစွဲသင့်သည်။
ပြုပြင်သင့်သည့် ဒုတိယစကားပုံကား "အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မည်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤစကားပုံအရ ဆိုလျှင် စီးပွားရေါ် အဆင်ပြေမှသာလျှင် သူတစ်ပါးဥစ္စာကို ခိုးခြင်းမှာ ရှောင်ကြဉ်နိုင်မည်. . စီးပွားရေး အဆင်မပြေလျှင်ကား ရသမျှ ခိုးတော့မည်... သီလမစောင့်ဟူ၍ ဖြစ်သည်.။
ခိုးမှုကို အားပေးသည့်သဘောဖြစ်နေ၏။ ပြောင်းလွဲသုံးစွဲသင့်သည်မှာ သီလစောင့်မှ အူမတောင့်မည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သီလစောင့်သည့် အတွက် အူမတောင့်ရသော မြို့တစ်မြို့နှင့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို တင်ပြချင်ပါသည်။
မြို့ကား အမရပူရမြို့ပင်ဖြစ်၏. ဘိုးတော်ဘုရားမင်းလက်ထက်က ဘုရင်ရော မြို့သူမြို့သားများအားလုံး က ဂရုဓမ်တရားလေးပါးကို စွဲမြဲကြသည့် အတွက် မိုးလေ၀သကောင်းမွန်ကာ ဆန်ရေစပါးပေါများသော မြို့အဖြစ် သူ့ခေတ်က လွန်စွာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပေသည်။ ငါးရားငါးဆယ်ဇာတ်နှင့် စရိယာပိဋကတ်၌ လာသော ဂရုဓမ္မဇာတ်၌လည်း ကုရုတိုင်း က္ကုန္ဒပတ္တနရဂိုရ်ပြည်ရှိ ဓနဉ္စယကောရမင်းကြီး နှင့်တစ်ကွ တိုင်းသူပြည်သားများသည်လည်း ဂရုဓမ်တရားလေးပါးကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာကြသည့် အတွက် တစ်ပြည်လုံး မိုးလေ၀သမှန်ကန်ကာ ဆန်ရေစပါးပေါများခဲ့သည်။
တစ်ခါတွင် ကာလိင်္ဂတိုင်း ဒန္တပူရပြည်ကြီးတစ်ခုလုံး မိုးခေါင်ရေရှား ကာ အငတ်ဘေးကြီးဆိုက်သည်။ တိုင်းသူပြည်သားများ မင်း၏ ဟစ်တိုင်သို့လာပြီး အငတ်ဘေးကြီး ငြိမ်းအေးပပျောက်အောင်လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်. အများအကြံပေးချက်အရ မင်းကြီး ဥပုပ်သီလစောင့်ကာ ကျက်သရေရှိသော တိုက်ခန်းသို့ ၀င်ပြီး မြေစာမြက်ကို ခင်းအိပ်လေသည်။ သို့သော မိုးကားရွာ၍မလာ..တစ်ဖန် လောကီအယူအဆကို အားသန်ကြသော ဗေဒင်ဆရာတို့က မင်္ဂလာဆင်ရှိလျှင် မိုးရွာသည်ပြော၍ မင်္ဂလာဆင်ကို သွားရောက် အလှူခံကြပြန်သည်. သို့သော် မိုးကားရွာမလာ..... နောက်ဆုံး၌ ပညာရှိသူတော် ကောင်းများ၏ အကြံပေးချက် အရ အရိုးဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဂရုဓမ်တရားလေးပါးကို ကူးယူကျင့်သုံးသော အခါ မိုးလေ၀သပြန်ကောင်းကာ သာယာဝပြောခဲ့ပေသည်...
၁။တိုင်းသူပြည်သားတို့သည် ၀ါတွင်းဝါပ တစ်လလေးသီတင်းဥပုပ်စောင့်ရခြင်း။
၃။ရတနာသုံးပါးကို နေ့ညအမြဲမပြတ် ၀တ်ကပ်ဝတ်တက်ပြု၍ မေတ္တတရား အထူးပွားများရခြင်း။
၄။မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားများကိုလည်းကောင်း ၊ အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံသော သူမြတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် အညီ ရိုသေမြတ်နိုးရှိခိုးပူဇော်ခြင်း။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်တစ်ကောင်းမင်း လက်ထက်တွင် ယင်းဂရုဓမ်လေးပါးကို အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်၍ တစ်ပြည်လုံးကို လိုက်နာကျင့်သုံးစေခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သို့အတွက် ဒါနပြုပါ. . ထိုသို့ပြုရာတွင် သီလကို အပျက်မခံပါနှင့် မိမိပြုခဲ့သော ဒါန၏ကောင်းကျိုးကို သက်ရှည် ကျန်းမာစွာဖြင့် ခံစားလိုလျှင် ငါးပါးသီလကို လုံခြုံအောင်စောင့်ပါဟု တိုက်တွန်းချင်ပါသည်...
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) သီလအစွမ်း
ရေးသားသူ may16 at Tuesday, March 10, 20097comments:
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 08, 20094comments:
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, March 07, 2009 No comments:
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, March 07, 20093comments:
ရေးသားသူ may16 at Friday, March 06, 20094comments:
လောက၌ အလှဆုံးတရားသည် … မေတ္တာ။
ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကို အလှဖုံးစေနိုင်သော တရားသည်လည်း . . . မေတ္တာ။
သက်ရှိလောကအလုံးစုံကို သာယာ ချမ်းမြေ့နိုင်သည်မှာလည်း . . . မေတ္တာ။
လူလူချင်း ချစ်ခင်ကြင်နာ၊ စည်းလုံးညီညာ၊ ဖက်လဲတကင်း ရိုင်းပင်း ကူညီစေတတ်သော စွမ်းအားသည်လည်း. . . မေတ္တာ။
ရေနွေးအိုးကဲ့သို့ ပွက်ပွက်ဆူနေသော အမျက်ဒေါသကို ငြိမ်းသတ်စေနိုင်သော ရေစင်ရေအေး သည်လည်း . . . မေတ္တာ။
မေတ္တာသည် ဘေးရန်ကင်းရှင်းစေလိုသောသဘော၊ ကိုယ် စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစေ လိုသဘော၊ ကြီးပွားတိုးတက် စေလိုသော သဘောဖြစ်၏။
မေတ္တာသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့၏။ သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်၏။ အနစ်နာခံနိုင်၏။ ချစ်ခင်ယုယလို၏။ ကူညီရိုင်းပင်းလို၏။ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလို၏။
မိဘတို့သည် အနစ်နာခံ၊ အဆင်းရဲခံ သည်းညည်းခံ၍ သားသမီးများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ၊ ကောင်းစားရေးတို့ကို မနေမနား ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြ သည်မှာ မိဘမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်၏။ အေးမြသော မိဘမေတ္တာရိပ်ဝယ် ခိုလှုံကြရသော သားသမီးများ သည် ပူပင်သောက ငြိမ်းအေးခွင့်ရကြ၏။ ဘေးရန်ကင်းဝေး ကြ၏။ ကြည်နူးရွှင်လန်းကြရ၏။ လောကကို ရင်ဆိုင်ဝံ့ကြ၏။ မေတ္တာသည် မေတ္တာကို တုံ့ပြန်စေနိုင်၏။
တစ်ဦး မေတ္တာ တစ်ဦးမှာ ဆိုသော စကားသည် လူလူချင်းသာမက လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်အကြား ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်အကြားတို့၌လည်း မှန်ကန်သည်သာတည်း။
ရန်ကို ရန်ဖြင့် မငြိမ်းအေးစေနိုင်၊ မေတ္တာဖြင့်သာ ငြိမ်းအေးစေနိုင်၏။ မေတ္တာလွှမ်းခြုံလျှင် ဘေးရန်လုံ၏။
မေတ္တာသည် အစွမ်းထက်မြက်ဆုံးသော ပီယဆေးဖြစ်၏။ မေတ္တာရှင်အား လူနတ်ဗြဟ္မာနှင့် သတ္တ၀ါများ အားလုံးတို့ ချစ်ခင်ကြည်ညိုကြ၏။ မိမိ မေတ္တာဖြင့် သူတစ်ပါးတို့၏ မေတ္တာကို ညှို့ယူနိုင်၏။
မေတ္တာကို လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်၏။ အခကြေးငွေ ပေးဝယ်၍မရပါ။ မေတ္တာဖြင့်သာ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
မေတ္တာသည် သင်၏ဘ၀ကိုလည်းကောင်း၊ သင့်မိဘမောင်ဘွားများအားလည်းကောင်း၊ သင်ကျင်လည်နေသည့် လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကောင်း၊ လန်းဆန်းချမ်းမြေ့ သာယာစေမည်မှာ ဧကန်သာတည်း။
လောက၌ အမြတ်ဆုံးတရား. . အလိုအပ်ဆုံးတရား. . . ။
သစ္စာမြေပေါ်တွင် ရပ်တည်ပြီးသာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ လူလူချင်းတန်းတူဆက်ဆံ နိုင်သည်။
သစ္စာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို မယိမ်းမယိုင်မကွေ့မကောက်ဘဲ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ရှေ့သို့ တိုးတက် သွားစေ၏။
သစ္စာသည် မှန်ကန်မှု.. တရားမျှတမှုဖြစ်၏။
သစ္စာသည် မတရားမှုမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်၏။ လူလူချင်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၊ ချုပ်ချယ်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စီးပွားရေးဖြင့် အမြတ်ထုတ်ခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်စားခြင်း၊ ခိုးဝှက်လုယက်ခြင်း၊ နယ်ချဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်း စသည့် မတရားမှုများကို ပိတ်ပင်ဟန့်တား၏။
သစ္စာကို မြတ်နိုးသူအား သစ္စာတရားက ပြန်လည်စောင့်ရှောက်သဖြင့် ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာကို ခံယူရမည်ဖြစ်၏။ သစ္စာရှင်သည် မုသားစကားကို မနှစ်သက်၊ မမှန်သောစကားကို မဆို၊ ဆိုပြီးသောကတိစကားကို မပယ်ဖျက်၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် ၀တ္တရားများကိုလည်း မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်၏။ ၀စီသစ္စာနှင့် အရိယသစ္စာတို့၏ အရသာသည် အရသာ အပေါင်းတို့တွင် အချိုမြိန်ဆုံးသော အကောင်းမြတ်ဆုံးသော အရာဖြစ်၏။
ကမ္ဘာ့အလှဆုံးတရားနှင့် အမြတ်ဆုံးတရား. . .
လူတိုင်း၏ ဘ၀ကိုသာယာမြင့်မြတ်သော တရားနှစ်ပါး. . .
လူသားတို့၏ ဘ၀များနှင့် ကမ္ဘာလောကကြီးကို အကောင်းဘက် အပေါင်းလက္ခဏာ ဘက်သို့ပြုပြင် ပြောင်းလဲ စေရာတွင် အားအကြီးဆုံးသော စွမ်းအားနှစ်ပါး. . .
မေတ္တာရှင်သည် သစ္စာရှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ သစ္စာသည် မေတ္တာရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
မေတ္တာနှင့်သစ္စာ တို့၏ တန်ဖိုးကို သိနားလည်သူတို့သည် ဤတရားနှစ်ပါးကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထွေးထားကြမည် ဖြစ်သည်။
လူသားတိုင်း၏နှစ်လုံးသားဝယ် မေတ္တာနှင့်သစ္စာတရားတို့ ပွင့်လန်း ဝေဆာလာသောအခါ ဤကမ္ဘာလောကကြီး သည် အမြင့်မားဆုံးသော အတိုင်းအတာအထိ ငြိမ်းချမ်းသာယာ စည်ပင်ဝပြော လာမည်ဖြစ်သတည်း။
မေတ္တာက မအောင်မြင်နိုင်သော ဘေးရန်သည်မရှိ။
သစ္စာက မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သော အရာသည်မရှိ။
မေတ္တာတရားဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြစို့. . . ။
သစ္စာတရားဖြင့် ဘ၀ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြစို့. . . ။
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် (မေတ္တာ နှင့် သစ္စာ)
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, March 05, 20096comments:
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, March 04, 20094comments:
ကျွန်မ မေ၁၆ ၏....
အရမ်းအရမ်းကို... ချစ်ရပါသော အစ်မ ပန်းကဗျာ၏ (၂.၃.၂၀၀၉) တွင်ကျရောက်သော မွေးနေ့လေးပါ။
မမရေ.... ဘ၀နှင့် ဆန္ဒ ထပ်တူကျပါစေ၊ မေတ္တာချစ်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေလဲ ရရှိပါစေနော်...။
မမရေ မွေးနေ့ပွဲလာတဲ့ မောင်နှမတွေကိုလည်း ညီမ ဧည့်ခံလိုက်ဦးမယ်နော်။ ဘာစားချင်လဲ မသိဘူး ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေတော့အကုန်လုပ်ထားတယ်။ လက်ဆောင်ပေးပြီး ဒီတိုင်းတော့ မပြန်ကြနဲ့နော် တစ်ခု ခုတော့ စားသွားပါ...ရှင်။
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ မမလဲ အထူးပျော်ရွင်ပါစေနော်။
ကဲ .....မေ၁၆ ကတော့ ပန်းကဗျာအိမ်သွားပြီး ၀ါးတီးလိုက်ဦးမယ်။
ရေးသားသူ may16 at Monday, March 02, 2009 11 comments:
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 01, 20094comments:
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, March 01, 20095comments: